कसरी भयो क्यूवामा शसस्त्र क्रान्ति ? – www.janabato.com
Taja-update TOP STORIES प्रवास
८ आश्विन २०७४, आईतवार ०९:५७ September 24, 2017 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
सन् १९५६ मा मध्यल्याटिन अमेरिकी देश क्यूवा तानाशाह वाटिस्टाको अमेरिका समर्थित कुशासनको मुनि नराम्रो ढंगले पिल्सिएको थियो । प्रहरी प्रशासनले कुनै विरोधीलाई क्रुरतापूर्वक कुल्चिरहेको थियो । गिरफ्तार मानिसहरुलाई डरलाग्दो ढंगले अमानवीय यातना दिईन्थ्यो । उनीहरुका टुक्रा टुक्रा पारिएका लासहरु सडकका पेटीहरु तथा समुन्द्रमा तैरिरहेका देखिन्थे । वाटिस्टाले सोभियत संघ र अन्य समाजवादी देशहरुसंग आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध सम्पूर्ण रुपले तोड्यो । उ अमेरिकी साम्राज्यवादी हातहरुको कठपुतली मात्र बन्न बाध्य थियो । क्यूबा कम्युनिष्ट पार्टी सोसलिष्ट पपुलर माथि प्रतिबन्ध घोषणा गरियो । अमेरिकी पुँजीपतिहरु देशैभरी फैलिए । सेना अमेरिकी अधिकृतहरुले भरिएको थियो र प्रहरीमाथि अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएको नियन्त्रणमा थियो । सम्पूर्ण रुपमा हेर्दा क्यूवाको स्थिति एउटा अमेरिकी उपनिवेश जस्तो भइसकेको थियो ।
तर क्यूबाका मानिसहरुमा आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि विद्रोहको पुरानो परम्परा विद्यमान थियो । १९ औं शताब्दीमा उनीहरुले आधा घृर्णित तानाशाह मैकाडोंलाई सत्ताबाट गलहत्याएका थिए । वाटिष्टा पनि डराएको थियो । एउटा युवक वकिल फिडेल क्यास्त्रोको नेतृत्वमा केही उत्साहित क्रान्तिकारीहरुले मोंकाडो ब्यारेकमा हमला गरेका थिए । यो कार्वाहीमा विद्यार्थी, युवा, मजदुर, सरकारी कर्मचारी र कारीगारहरुले भाग लिएका थिए । राजनीतिक अनुभवको कमी तथा ठोस कार्यक्रमहरुको अभावमा यी मानिसहरुलाई असफल पारियो । सबै व्यक्तिहरु गिरफ्तार गरिए । फिडेलमाथि मुद्धा चल्यो र उनीहरुको अदालतमा आफ्ना ऐतिहासिक भाषण हिष्ट्र विल एब्जीमिल्ब मी मा दिए तत्पश्चात सबैलाई आम माफी दिईयो । यी क्रान्तिकारी मैक्सिको गए र त्यहीबाट क्रान्तिको आगामी तयारी गर्न थाले ।
क्यूबाभित्र पनि कयौं अन्याय, अत्याचार सहेर मजदुर, बुद्धिजीवि, विश्वविद्यालय र हाइस्कुलका विद्यार्थी वाटिस्टा र उसका अमेरिकी रक्षकहरुको विरुद्धमा संघर्ष गरिरहेका थिए । भूमिगत प्रेस वाटिस्टाको अपराधका पर्दाफास गरिरहेका थियो । वाटिस्टाको तानाशाही शासनको विरुद्धमा सभा, जुलुश, प्रदर्शन र हड्ताल बढ्दै गइरहेको थियो । तानाशाहले उच्च शिक्षाका सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई बन्द गरिदियो । घुसखोरी, कालाबजारी र डर त्रासको बलमा तानाशाह वाटिस्टा विपक्षीहरुको समर्थन बटुल्ने असफल प्रयत्न गर्दै जोसे मार्ती जस्ता कवि, क्रान्तिकारी र सहिदहरुको नामलाई पनि प्रयोग गर्दथ्यो ।
क्यूवाको बिद्यमान क्रान्तिकारी परिस्थितिलाई देखेर फिडेल क्यास्त्रो र उनका साथीहरुले क्यूबामाथि हमला गर्ने योजना निर्माण गरे । उनीहरुलाई स्पेनिश सेनाको एउटा पूर्व कर्णेल अल्वर्टोबायोको सहयता मिल्न गयो । जो गुरिल्ला युद्धमा विशेषज्ञ हुनुका साथै कवि पनि थियो । मैक्सिको शहरदेखि ३५ किलोमिटर टाढा साटा रोजा ठाउँमा बायोले फिडेल क्यास्त्रो सहितका क्रान्तिकारीहरुलाई प्रशिक्षण दिन सुरु ग¥यो । उनीहरुले हतियारको प्रयोग गर्न र कडा भन्दा जीवन बाँच्नको लागि अभ्यास गर्न थाले । यी छात्राहरुमा चे अर्नेष्टो ग्वेभारा, राउल क्यास्त्रो, डारियो लोपेज, सिमैलो र कार्लोस बर्मडेजजस्ता मानिसहरु थिए । फिडेल पछि आधुनिक क्यूबाको निर्माता बने । २२ जुन १९५७ सिआइएको अनुरोधमा मैक्सिन सिक्रेट पुलिसले साटा रोजामा छापा मारेर क्रान्तिको तयारीमा संलग्न यी क्रान्तिकारीहरुलाई गिरफ्तार ग¥यो । मैक्सिकोका पूर्व राष्ट्रपति पूर्व नाविक सेनाका मन्त्री र एकजना ठूला नेतासमेृत कयौं कलाकार, विद्धानहरुको पहलकोे कारण यिनीहरु रिहा भए ।
२२ जून, १९५७ मा सिआइएको भनाईमा मैक्सिन सिक्रेट पुलिस मैक्सिको र क्यूबाको सरकारले यिनका योजनाहरु नष्ट भएको माने । तर उनीहरुको रिहाई हुनुभन्दा पहिले फिडेल क्यास्त्रोले स्वीडेन निवासी बनेर ग्रेनदेखि ग्रेनमा नामक याट समुद्री वेडा १२ हजार डलरमा खरिद गरे । १२ हजार यात्रुुको क्षमता भएको यो समुदी बेडामा बसेर क्रान्तिका ८२ सिपाही क्यूबामा वाटिस्टाको गढमाथि आक्रमण गर्न अगाडी बढे । यस समयमा उनीहरुले कयौंपटक गद्धारी र हतासाको सामना समेत गनुप¥यो । तर उनीहरुले हिम्मत हारेनन् । ग्रैनमा जसरी समुद्रमा अगाडी बढ्थ्यो, त्यसरी नै क्रान्तिकारीहरुको उत्साह बढ्दै जान्थ्यो । उनीहरु क्यूबाको गीत र २६ जूलाई आन्दोलनको गीत गाउँदै अगाडी बढिरहेको हुन्थे । २६ जुलाईको दिनमा नै मोंकाडो ब्यारेकमाथि फिडेलले असफल आक्रमण गरे । फिडेल क्यास्त्रोले उद्घोष गरे, “अब हामी कि नायक बन्ने छौं कि सहिद !”
३० नोभेम्बरमा जब ग्रैनमा क्यूबाको सामुन्द्रिक तटदेखि दुई दिनको दुरीमा थियो । वाटिस्टाको विमानहरुले उसलाई देखे । वाटिस्टाको नाविक वेडाहरुले क्रान्तिकारीहरुलाई घेरा हालेरर धुवाँधार रुपमा गोली चलाउन सुरु ग¥यो । आकाशमा जहाजहरुले गोली बर्षाइरहेको थियो । उनीहरुको घाँटी सुकिरहेको थियो । उनीहरु उखु चुसेर आफ्नो प्यास मेटाउन थाले । ४ डिसेम्बरको सम्पूर्ण रात उनीहरुले उखुको खेतमा सुतेर बिताए । अलिज्रिया दिपडओमा पुगेर आफ्नो गाइडको गद्धारीका कारण उनीहरुले दुश्मनका भयानक हमलाहरुको सामना गर्नु प¥यो । आधाभन्दा बढी मानिसहरु मारिए । र, २० जनाभन्दा बढी गिरफ्तार गरिए । यसमा कयौं क्रान्तिकारीहरुलाई यातना दिइयो । त्यसपछि गोली हानेर हत्या गरियो । बाँकी क्रान्तिकारी बाँचेर निस्किए । उनीहरुले सिरिया मेस्ट्राको पहाडको टापुमा एउटा किसानको छाप्रोमा जम्मा भए । क्यूबाका किसानले ती क्रान्तिकारीहरुको मद्दत गरे ।
अब आम जनताको विश्वासमा बिजय पाउनको लागि छापामारहरुले निरन्तर जित हासिल गर्न सुरु गरे । १६ जनवरी, १९५७ मा प्लाटा नदिमा बनेको सैनिक चौकीमा ती मानिसहरुले आक्रमण गरे । र, दुईजना सैनिकहरुको सफाया गरेर चौकी कब्जा गरियो । यसैबेला फिडेल क्यास्त्रोको मातहतमा विद्रोहको गढ बनाउने निर्णय भयो । यी पहाडहरुमा शरण लिदै १९ औं शताब्दीमा स्वतन्त्रता सेनानीहरुले पनि आफ्नो क्रान्तिकारी कार्वाहीको सुरुवात गरे । यी यस्ता पहाडी इलाकाहरु थिए, जहाँबाट एउटा मेसिनगनले एक्लै एक हजार सैनिकहरुको गारदसंग सामना गर्न सक्दथ्यो । यति मात्र होईन, यी पहाडहरुमाथि विमान उड्नु पनि खतरा सिवाय अरु केही थिए ।
२२ जनवरी, १९५७ मा विद्रोहीहरुले वाटिस्टाका सेनाहरुको एउटा थप टुकुडीलाई हटायो । २६ जुलाई आउँदा आउँदै हवाना (क्यूवाबो राजधानी) का भुमिगत नेताहरुको विद्रोहीहरुसंग सम्पर्क स्थापना भयो । उनीहरुले पहाडी इलाकामा आएर फिडेल क्यास्त्रोसंग भेट गरे । उनीहरुले क्रान्तिकारीहरुको लागि हतियार, गोलाबारुद कपडा, औषधी र सम्पत्तिको जिम्मा लिए । १७ फरवरी, १९५७ मा न्यूयोर्क टाइम्सका प्रतिनिधि हर्वर्ट मैथ्युजले यो पहाडी फिडेलसंग भेटघाट गरे । अमेरिकी अखबारमा विद्रोहीहरुका ठूला ठूला तस्विरहरु छापिए । हेर्दाहेर्दै उनीहरु विश्वमा चर्चा पाउन थाले । विश्वका मुक्तिकामी जनता अमेरिकी साम्राज्यवाद र तानाशाह वाटिस्टालाई घृणा गर्न थाले । हवानामा छात्रहरुले विद्रोह गरे । मार्चको मध्यमा ५० छापामारहरुसंग फिडेल क्यास्त्रोले भेटघाट गरे । अब विद्रोहीहरुको सेनाको संख्या तीन प्लाटुन बनिसकेको थियो । किसानहरुको बीचमा फिडेल क्यास्त्रो र उनका साथीहरुको उत्साहलाई बढायो । चाँडै उनीहरुले सिरिया मेष्ट्राको तल्लो बेल्टमा रहेका शत्रुका क्याम्पहरुलाई ध्वस्त गरे । वाटिस्टाले किसान र छापामारहरुको सम्पर्क तोड्नका लागि सिरिया मेष्ट्राका गाउँहरुमा किसानहरुलाई निष्कासन गर्न सुरु ग¥यो । तर यसको जोडदार रुपमा प्रतिरोध भयो । यस समयमा कयौं किसान विद्रोह छापामारहरुसंग मिल्न पुगे ।
वाटिस्टाको अखवारले क्रान्तिकारीहरुलाई मस्कोका एजेण्टको रुपमा बदनाम गर्ने कोसिस गरे । फिडेल क्यास्त्रोको आस्था माक्र्सवाद लेनिनवाद थियो । चे ग्गेभारा जस्ता क्रान्तिकारीहरु लड्नुका साथै क्रान्तिकारी विचारधाराको प्रचार पनि गर्दथे । सन् १९५७ को समाप्तिसंग विद्रोहरुले सिरिया मेष्ट्रामाथि पनि सम्पूर्ण रुपमा कब्जा गरे । मार्च, १९५८ मा राउल क्यास्त्रोको नेतृत्वमा पहाडी इलाकाबाट बाहिर आएर अर्को मोर्चा निर्माण गरियो । १२ मार्च, १९५८ मा फिडेल क्यास्त्रोले एउटा घोषणपत्र जारी गरे, जसमा तानाशाही व्यवस्थाको विरुद्धमा आम विद्रोह गर्नका लागि अपिल गरियो । १ मार्च सेनालाई विद्रोहरुको साथ दिनका लागि अपील गरियो । अगस्त १९५८ मा क्यास्त्रोले आफ्नो आक्रमणको अन्तिम योजना निर्माण गरे ।
यस समयमा वाटिस्टासंग २० हजार सेना, टैंक र विमन थिए । विद्रोहीहरुसंग केही योद्धा थिए । उनीहरुका हतियार पनि पुराना र खराब थिए । नयाँ योजना अन्तर्गत फिडेल र राउलको नेतृत्वमा छापामारहरुले सांटियागो सहरको घेराबन्दी गरे । सेमिलो र हनुमाईका छापामारहरुलाई पिनाल डेल रियो प्रात्को पश्चिमी इलाकामा हमला गर्नु थियो । चे को नेतृत्वमा रहेका छापामारहरुलाई विलास हुदै हवानाको बाटो सफ गर्नु थियो । त्यहाँ चे ग्वेभाराको नेतृत्वमा छापामारहरु सहितको दस्ता छापामार सान्टाक्लारा हुदै हवानातर्फ बढ्ने योजना पनि बनाइयो । त्यसै समयमा पश्चिमबाट सेमिलीको सेना हमला गर्ने रणनीति तय ग¥यो । लडाई सुरु भयो । उपरोक्त रणनीतिको कारण वाटिस्टाको सेनाले एकैपटक चार मोर्चामा लड्नु प¥यो । चे ग्वेभाराका साथीहरु बहादुरी र कुशलताको साथ लड्दै सान्टा क्लारामा कब्जा गर्ने क्रान्तिकारी विजयको सुरुवात गरे । वाटिस्टाले यो खबर पाउने वित्तिकै देश छोडेर भाग्नु प¥यो । त्यसको ठाउँको जनरल सेस्टिलोले सेस्टिलोको यस कदमको निन्दा गरे । २१ जुन, १९५९ मा चे र सेमिलीको सेनाले हवानामा भब्य स्वागत गरे । तानाशाहका बचेखुचेका सैनिकहरुले पनि आत्मसमर्पण गरिदिए । क्रान्तिको विजय सुनिश्चित भयो ।
← मगर संघले गर्यो रक्तदान कार्यक्रम
धनुषामा नेकपाका नेता रिहा, दाङमा निवासमै प्रहरी छापा →
नवलपरासी इन्चार्ज जुझारु रिहा, लुम्बिनीमा अझै नेकपाका दुई दर्जन नेता कार्यकर्ता हिरासतमा
२७ मंसिर २०७४, बुधबार १३:४५ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on नवलपरासी इन्चार्ज जुझारु रिहा, लुम्बिनीमा अझै नेकपाका दुई दर्जन नेता कार्यकर्ता हिरासतमा
किम जोङको हत्या योजना, ‘हत्यारो कमाण्डो’ दक्षिण कोरियामा
१४ आश्विन २०७४, शनिबार ०४:४८ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on किम जोङको हत्या योजना, ‘हत्यारो कमाण्डो’ दक्षिण कोरियामा